Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » IMEX Ndebanye aha America gosipụtara Ezi Omume
Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Naanị otu ọnwa ka ndebanye aha gachara maka IMEX America na Las Vegas na Nọvemba a, arịrịọ onye zụrụ ahịa kwadoro dị elu karịa ka ọ dị n'otu oge na 2019, nke bụ ndekọ.
Ndị na -eme ihe ngosi mba ofesi na -eme nkwekọrịta n'izu n'izu wee gbasaa ngalaba niile nke ụlọ ọrụ mana ọkachasị n'Ebe Ugwu America.
IMEX America ga -arụ ọrụ dị mkpa na mgbake azụmaahịa ebe ọ na -aga.
Ihe omume a na-eme na Nọvemba 9-11 na Mandalay Bay na Las Vegas, Nevada.
“Ndebanye aha ndị na -azụ ahịa na -enweta ngwa ngwa na ndị na -azụ ahịa na -edebanye aha na ọnụ ọgụgụ siri ike. Enwekwara ụdị mkpọtụ dị n'etiti ndị na -egosi ihe, na -agbakwụnye ezigbo ọkụ n'oge ihe ngosi anyị, IMEX America. " Ray Bloom, onye isi oche nke IMEX Group, na -anabata mmụba nke ndebanye aha tupu ngosi a na Nọvemba a.
N'akụkụ ndị na -azụ ahịa, ndị na -eme ihe ngosi mba ofesi na -eme nkwekọrịta n'izu n'izu wee gbasaa ngalaba niile nke ụlọ ọrụ mana ọkachasị na North America. Ha gụnyere ebe dịka Canada, Italy, Boston, Atlanta, Argentina, Hawaii na Puerto Rico; yana otu ụlọ oriri na nkwari akụ anọ Oge, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group na Associated Luxury Hotels International.
Ray Bloom gara n'ihu, sị: “Mgbe anyị na ndị na -azụ ahịa na ndị na -eme ihe ngosi kwurịtara okwu, anyị maara na IMEX America ga -arụ ọrụ dị mkpa na mgbake azụmaahịa ha yana inye ndị otu ha ohere ijikọ aka mgbe afọ siri ike gasịrị. Ndị otu anyị nọ n'ọrụ na -arụ ọrụ n'azụ ihe nkiri iji gosipụta ihe ngosi juputara na oge echefu echefu yana ohere dị mkpa iji mee azụmahịa nke na -akwado ihe ngosi anyị niile. "
IMEX America na-eme na Nọvemba 9-11 na Mandalay Bay na Las Vegas Smart Mọnde, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8. Ịdebanye aha - n'efu - pịa Ebe a.